पोइडेको → पानी पोइन्ट • एल्के • पिउनेहरू drinking पिउने पानीको फोहोरा • जेड्रोजे
जल बिन्दु एकल प्रतिनिधिको रूपमा एल्के पोल्याण्ड मा प्रस्ताव छ पिउने, झरनाहरू पानी पिउने वसन्त र पिउने पानीका स्प्रि ,हरू, स्कूल र विश्वविद्यालयहरूको लागि, कार्यालय भवनहरू, शपिंग मल्लहरू, उत्पादन प्लान्टहरू, फिटनेस क्लबहरू, खेलकुद सुविधाहरू, एयरपोर्टहरू, स्टेशनहरू, स्वास्थ्य सुविधाहरू, मनोरंजन हलहरू, थिएटरहरू, सिनेमाघरों, राज्य कार्यालयहरू, पार्कहरू, खेल मैदानहरू, प्रोमोनेडहरू, आदि)।
एल्के कम्पनीहरूको मुख्यालय डाउनर्स ग्रोव, इलिनोइसमा छ र संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्माण सुविधाको सुविधा छ र चीन र मेक्सिकोमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालनले विश्वव्यापी बजारमा सेवा दिइरहेको छ।
दोहोरो-उद्देश्ययुक्त पेय - LZS8WSS2K मोडेल
यस मोडेलमा पानी बोतल भरने स्टेशन र एक पिउनेको संयोजन हो, अतिरिक्त जहाजहरूको प्रयोग बिना सीधा तिर्खा मेट्न। यो स्कूल, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक सुविधाहरू, फिटनेस क्लबहरू, कार्यालयहरू, अस्पतालहरू सहित एक आदर्श समाधान हो।
एकै साथ, यसले प्लास्टिकको बोतलहरूको मात्राको बारेमा उपभोग गरेर नयाँ खगोल दर्शनको परिचय गराउँदछ जुन पानीको खपतको यस प्रकारलाई धन्यवाद दिन्छ।
हरियो ट्रिकर - बचत गरिएको प्लास्टिकको बोतलहरूको संख्या प्रदर्शन गर्दछ।
ग्राफिक फिल्टर मोनिटर (फिल्टर मात्रै मोडेलहरू) - हरियो, पहेंलो, र रातो LEDs ले फिल्टरको अवस्था सूचित गर्दछ।
Laminar धारा - Recessed फिलिंग नोजल - ले चिकनी प्रवाह र न्यूनतम spatter सुनिश्चित गर्दछ
पानी, –-– l / मिनेट।
लचिलो टाउको - फ्लेक्सी गार्ड प्रयोगकर्ता चोटपटकबाट बचाउँछ। यसको एक लेप छ जुन सूक्ष्मजीवहरूको बृद्धिबाट बचाउँछ।
इलेक्ट्रोनिक सेन्सर सक्रियता - असक्रिय र २० सेकेन्ड निष्क्रिय पछि स्वचालित स्विच अफको साथ hygienic अपरेशन।
यसका लागि उत्तम:
स्कूल र कलेजहरू
स्वास्थ्य क्लब र अधिक
मोडेल LZS8WSS2K - यो उपकरण %०% रिसाइक्ड सामग्रीबाट बनेको छ, र अक्षम व्यक्ति, बच्चाहरू र व्हीलचेयरमा वयस्कहरू द्वारा प्रयोगको लागि उपयुक्त छ।
काउन्टरको साथ विशेष प्रदर्शनले प्रयोगकर्तालाई बचत गरिएको पालतु बोतलहरूको स about्ख्याको बारेमा सूचित गर्दछ, यसप्रकार हालको पारिस्थितिक प्रवृत्तिको अनुरूप।
यो एक उच्च-गुणस्तर फिल्टर (सिसा, क्लोरीन, ठोस सामग्री र सुधारिएको स्वाद र गन्ध) को साथ लगभग १२,००० लिटर पानी र एक फ्रिजमा पर्याप्त छ।
जब स्कूल संस्थामा प्रयोग गरिन्छ, यो विशेष, अत्यधिक कुशल, लचिलो इजी-फ्लेक्स टाउकोले सुसज्जित हुन सक्छ जसले बच्चाहरूलाई चोटपटकबाट बचाउँछ। बोतल भर्नको लागि डिसपेन्सर एक सेन्सरले स्वचालित रूपमा ट्रिगर गर्दछ।
* एल्युमिनियम प्लेटमा कुनै पनि लोगोटाइप बनाउन यो सम्भव छ।
पिउने - मोडेल EZS8S
यसै गरी माथिको मोडेलमा, यो एक रेफ्रिजरेटर, एक उच्च-गुणस्तरको फिल्टर (सिसा, क्लोरीन, ठोस सामग्री र सुधारिएको स्वाद र गन्ध) को साथ सुसज्जित छ लगभग १२,००० लिटर पानीका लागि पर्याप्त।
जब स्कूल संस्थामा प्रयोग गरिन्छ, यो विशेष, अत्यधिक कुशल, लचिलो इजी-फ्लेक्स टाउकोले सुसज्जित हुन सक्छ जसले बच्चाहरूलाई चोटपटकबाट बचाउँछ।
अक्षम व्यक्तिहरू, बच्चाहरू र व्हीलचेयरहरूमा वयस्कहरूको लागि उपयुक्त।
पिउने - LZSTL8WSS2K सेट
वयस्क र बच्चाहरूको लागि माथि प्रस्तुत गरिएका मोडेलहरू समावेश गरी दुई-स्तर सेट।
बोतल भर्नको लागि डिसपेन्सर एक सेन्सरले स्वचालित रूपमा ट्रिगर गर्दछ।
भित्ता माउन्ट बोतल भरने स्टेशनहरू
A एक बटन द्वारा सक्रिय
• ग्रीन ट्रिकर काउन्टर
Drain जल निकासी प्रणाली र यसको प्रोफाइलिiling हटाइन्छ
उपकरणमा बाँकी रहेको पानी
Fill यो भर्न प्रयोग गरिन्छ: पानीको बोतलहरू, बोतलहरू, जगहरू
Difficult गाह्रो ठाउँमा स्थापनाको लागि डिजाइन गरिएको
मुख्य शक्तिमा पहुँच
• ग्रीन ट्रिकर प्रदर्शन A एएए ब्याट्री द्वारा संचालित
Offices कार्यालय र कार्यस्थलहरूको लागि आदर्श
Contact एक सम्पर्क रहित सेन्सर द्वारा actuated
– Filling.–- l l / मिनेटको उच्च भरण क्षमता
20 निष्क्रियताको २० सेकेन्ड पछि स्वचालित शटडाउन
पॉलिश स्टेनलेस स्टीलको बनेको कचौरा पिउनुहोस्। कचौराको विशेष आकारले छप्पर घटाउँछ। एक आत्म retracting actuator कि भारी प्रयोग को लागी प्रतिरोधी हो र कुनै पकड वा घुमाउन को आवश्यकता छ। जेटको उचाई समायोजन गर्दै बटनमा विशेष प्वालको माध्यमबाट, बिना छुट्टिनु।
पॉलिश स्टेनलेस स्टीलको बनेको कचौरा पिउनुहोस्। कचौराको विशेष आकारले छप्पर घटाउँछ। एक आत्म retracting actuator कि भारी प्रयोग को लागी प्रतिरोधी हो र कुनै पकड वा घुमाउन को आवश्यकता छ। जेटको उचाई समायोजन गर्दै बटनको विशेष प्वालको माध्यमबाट, छुट्टिनु पर्दैन। पिउने सुरक्षात्मक भित्ता प्यानेलले सुसज्जित छ।
पिउने - भ्यानल-प्रतिरोधी मोडेलहरू
धेरै गुणस्तरयुक्त संरचनाको साथ मोडलहरूको श्रृंखला उच्च-दुई गुना मोटा साटन स्टेनलेस स्टीलको बनाइएको। एक सीसा-रहित, अत्यधिक टिकाऊ क्रोम-प्लेटेड ब्रास टाउकोको साथ सुसज्जित।
भ्यान्डल-प्रतिरोधी, सेल्फ-क्लोजिंग, जेटको उचाई नियन्त्रणको लागि एक खोलको साथ कुनै हेरफेर बटन।
यसले २ kg० केजीको ठाडो लोड सामना गर्न सक्छ। अशक्त मानिसहरूका लागि स्वीकृति। स्कूल, शपिंग सेन्टर, केयर र शैक्षिक संस्थानहरूका लागि उत्तम।
भान्डल प्रूफ एकीकृत पानी बोतल भरिने स्टेशन पानीको बोतलको साथ। फिल्टर र कूलि withको साथ उपलब्ध छ।
नवीन ग्रीन ट्रिकर काउन्टरले देखाउँदछ कि कतिवटा प्लास्टिकको बोतलहरू फोहोर होइनन् र वातावरणलाई सुरक्षित गर्दछन्।
धेरै गुणस्तरयुक्त संरचनाको साथ मोडेलहरूको श्रृंखला उच्च गुणस्तर २ मिमी मोटा साटन स्टेनलेस स्टीलको बनाइएको।
क्रोम-प्लेटेड ब्रासले बनेको सीसा-रहित, धेरै टिकाऊ टाउकोका साथ सुसज्जित। भ्यान्डल-प्रतिरोधी, सेल्फ-क्लोजिंग, जेटको उचाई नियन्त्रणको लागि एक खोलको साथ कुनै हेरफेर बटन।
Swirlflo® पेय पदार्थ - आधुनिक फारम
SWIRFLO श्रृंखलाबाट फारम पेय पदार्थको मामलामा सबैभन्दा उन्नत, भित्ता प्यानल र ठूलो वसन्त-फिर्ती बटनको साथ, उच्च-गुणवत्ता स्टेनलेस स्टीलको बनाइएको।
अक्षम व्यक्तिहरूको लागि अनुमोदन। स्वास्थ्य सुविधाहरू, एयरपोर्टहरू, स्टेशनहरू र अन्य सार्वजनिक सुविधाहरू र कार्यालयहरूलाई समर्पित।
एकीकृत पानीको बोतल भरने स्टेशन एक आधुनिक SWIRFLO पेयरको साथ उच्च गुणवत्ताको स्टेनलेस स्टीलले बनेको छ, बिना फिल्टरको, कूलि without बिना, भित्ता प्यानल र ठूलो वसन्त फिर्ती बटनको साथ।
नवीन ग्रीन ट्रिकर काउन्टरले देखाउँदछ कि कतिवटा प्लास्टिकको बोतलहरू फोहोर होइनन् र वातावरणलाई सुरक्षित गर्दछन्। अशक्त मानिसहरूका लागि स्वीकृति।
स्वास्थ्य सुविधाहरू, एयरपोर्टहरू, स्टेशनहरू र अन्य सार्वजनिक सुविधाहरू र कार्यालयहरूलाई समर्पित।
नरम पक्षहरू - पिउने - आधुनिक फारम
बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि पिउनेहरूको एक डबल सेट, एक उच्च सौंदर्यको स्टेनलेस स्टीलको बनाइएको, एक सुरक्षात्मक भित्ता प्यानलको साथ एक सौंदर्यपूर्ण उपस्थिति र आधुनिक फाराम।
अक्षम व्यक्तिहरूको लागि अनुमोदन। सार्वजनिक सुविधाहरू, एयरपोर्टहरू र स्टेशनहरूको लागि उत्तम।
पिउने एक उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टीलको बनेको छ, एक फिल्टर र कूलरको साथ, एक सुरक्षात्मक भित्ता प्यानलको साथ एक सौन्दर्यपूर्ण उपस्थिति र आधुनिक फाराम।
पिउने र पानी स्प्रिंग्स - आउटडोर
पानी बोतल भरने स्टेशनहरू र पिउनेहरू - ENDURA
भित्तामाउन्ट गरिएको पानीको बोतल स्टेशन, भ्यानल-प्रुफ, एक टिकाऊ संरचनासहित, चिसो-रोलि steel स्टिलको बनाइएको, mm. mm मिमी मोटाई।
पाउडर फिनिश, मौसम प्रतिरोधी। आत्म-बन्द भल्भको साथ सजिलो-प्रयोग फ्रन्ट बटन।
Flow.–-– l / मिनेटको क्षमताको पानी छरितोलाई घटाउने बहावसँग फुट। मनोरन्जन क्षेत्रहरूका लागि उत्तम।
यो अशक्तहरूका लागि प्रमाणित छ। यो शीत प्रतिरोधी संस्करणमा उपलब्ध छ - भल्भ थप भुक्तान योग्य छ।
पानी पिउने बोतल स्टेशन एक पिउने र कुकुरहरूका लागि एक कचौरा, भ्याण्डल-प्रूफ, एक टिकाऊ संरचनासहित, चिसो रोलि steel स्टिलको बनाइएको, mm. mm मिमी मोटाई।
बाहिरी पेय पदार्थ - प्राकृतिक समग्र
प्रबलित प्राकृतिक समग्रबाट बनाइएको एक पिउने कचौरा - भाइब्रो कंक्रीट। मौसम अवस्था प्रति धेरै प्रतिरोधी। अन्य तत्वहरू उच्च-गुणवत्ता स्टेनलेस स्टीलको बनेका छन्। बर्बर प्रतिरोधी टाउको। अशक्त मानिसहरूका लागि बनाईएको। यो शीत प्रतिरोधी संस्करणमा उपलब्ध छ - भल्भ थप भुक्तान योग्य छ।
पेडेस्टल पेय पदार्थ प्रबलित प्राकृतिक समग्रबाट बने - भिब्रो कंक्रीट। मौसम अवस्था प्रति धेरै प्रतिरोधी। अन्य तत्वहरू उच्च-गुणवत्ता स्टेनलेस स्टीलको बनेका छन्। बर्बर प्रतिरोधी टाउको। यो शीत प्रतिरोधी संस्करणमा उपलब्ध छ - भल्भ थप भुक्तान योग्य छ।
5 /5( 42 वोट )
सफा पानिनि: शुल्क पानीफोहराहरुपिउने पानीको फोहोराशहर स्प्रिंग्सPitnikपिट्निकीपानी पिटरहरूपिउनेहरूपिउनेहरू वितरकएल्के पिउनेहरूधातुको पिउनेहरूपिउने उत्पादकआन्तरिक पिउनेहरूबाह्य पिउनेहरूपिउनेस्कूल पिउनेसिधा ट्यापबाटविद्यालयहरूको लागि पानीधाराको पानीपिउने पानी स्पावसन्तपिउने पानीको स्रोतवसन्तपिउने पानी वसन्त